Xasan Sheekh iyo kooxdiisa oo qaaday dhaqan looga bartay maamulkii hore ee Farmaajo. - Jowhar somali news leader
By Master	 On Jun 22, 2022
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa qarisay inay sheegto sababta waqtiga dheeraadka loogu kordhiyey safarka Madaxweynaha. Maamulkii hore ee Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu yaqaanay dhaqanka qarinta waxyaabaha dabiiciga ah.
Sawirro: NISA oo Muqdisho ku qabatay kooxo watay bistoolado…
Inkastoo Madaxweyne Xasan Sheekh uusan ku dhicin Coronavirus, haddana Madaxda Adduunka ma qariyaan marka uu asiibo cudurkan, waana wax caadi ka ah Adduunka oo aanay ceeb aheyn qofka uu ku dhaco Corona Madaxda iyo wafdigooda.
Heerka fayraska ee Imaaraadka ayaa kor uga kacay 200% maalintii ilaa in ka badan 1,400 oo tiro maalinla ah uu gaaro toddobaadkan, laakiin dhakhaatiirtu waxay sheegeen in dad yar ay u baahdeen daawaynta isbitaalka, tiro yar oo bukaanna ahna ay qabeen burukiito ama qabow
Master 823 posts
Refugees recount the occasions of hell in detention facilities in Libya
Sawirro: NISA oo Muqdisho ku qabatay kooxo watay bistoolado iyo agabyo kale.